HomeWararka MaantaZidane Oo U Dabbaal-degaya Sannad-guuradii 1aad Ee Tababarenimadiisa
Maanta oo kale sannad ka hor ayaa loo magacaabay tababaraha koowaad ee kooxda Real Madrid, kaddib markii shaqada laga caydhiyey Rafa Benitez oo maamuli kari waayey kooxdaas.
Wariye kasta oo su’aal weydiiyey maanta, ka hor kulanka caawa ee Sevilla ee Copa del Rey, waxa uu u rajeeyey sannad wanaagsan, salaan iyo damaashaad ay wadato farxad wejigiisa ka muuqata ayaana wehelinayey.
Haddii bilo loo xisaabiyo, Real Madrid waxa uu maamule u ahaa 12 bilood oo buuxa, inyar kaddib markii la magacaabayna waxa uu kooxda kusoo celiyey jidka guusha, iyadoo dhibco yar oo kaliiya ay Barcelona kaga qaadday horyaalka La Liga. waxa uu kula guuleystay Champions League, UEFA super cup iyo World club cup.
Kooxdiisa waxay jebisay rikoodho badan oo ah kulamadii ugu badnaa ee aan laga badinin iyo sidoo kale in ay badiyeen. Waxa uu laba jeer la ciyaaray Barcelona, mid uu guuleystay iyo mid barbar dhac ah ayaanu kala hoyday, iyadoo Atletico Madrid oo macmiil ka dhigatay sannadihii u dambeeyey, kulankii koowaad oo uu kooxda ku cusbaa kaddib, uu si layaab leh oo bahdilaad ah uu iyagoo garoonkooda jooga uga badiyey.
Guul-darro waxa ugu dambaysay ku-dhowaad sannad, muddadaasna guul iyo barbar dhac ayey si xidhiidh ah gacanta ugu dhigaysay Real Madrid.
Zidane oo dhowaan la weydiiyey xusuustiisa, waxa uu sheegay in fikir daraaddii ay timihii ka madheen (kaftan), laakiin uu ku faraxsan yahay natiijada ay kooxdiisu gaadhay, balse loo baahan yahay inay horumar sameeyaan, taas oo ah waxa kaliya ee uu ka fikiro noloshiisa oo dhan illaa wakhtigii ciyaartoyga uu ahaana uu kulan kasta ku dedaali jiray inuu horumar ciyaareed sameeyo.
Wakhtigii la magacaabay: January 4, 2016
Ciyaaraha uu maamulay Real Madrid: 53
Kulamada uu guuleystay: 41
Kulamada barbar-dhaca: 10
Ciyaartooyada uu safay: 30
Koobabka uu ku guuleystay: Champions League, Club World Cup, UEFA Super Cup
Sporting 0 vs 1 Barcelona – All Highlights & Goals – Champions League 2017